Kedụ uru dị n'ịzụrụ mmasị YouTube?
Mee ka njigide dịkwuo elu site na igosi ya na ọ dị mkpa ilele
Ọkacha mmasị na Nyere Aka Nweta Nchọgharị Nchọgharị
100% Nchekwa & Nweta nkwa
100% AdSense Nchekwa!
A na-anapụta ihe ndị na-amasị gị site na ndị mmadụ nkịtị - enweghị ntụpọ!
Anyị Na-anapụta Anyị Karịa Gị Nyere Gị Aka!
Nsonaazụ Malite na-egosi na oge 24-72
Ndụmọdụ ndị dị mkpa mgbe ị na-azụta mmasị YouTube iji too ọwa gị
Obi abụọ adịghị ya na YouTube bụ otu n'ime ọrụ nkwanye vidiyo kacha ukwuu n'ụwa taa. Dị ka a Akụkọ Statista, Nnyocha e mere gosiri na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ na US (74%) na-etinye oge ka ukwuu na YouTube. Ọ bụ ikpo okwu na-enye ndị mmadụ ohere ịkesa vidiyo ha n'elu ikpo okwu wee mepụta ntọala ndị na-ege ntị raara onwe ha nye. Ndị na-ege ntị nwere ike biputere nkọwa, dị ka vidiyo ndị ahụ, ma soro ndị enyi ha kerịta ọdịnaya.
Mmasị, nlele na nkọwa bụ metrik dị oke mkpa maka ọwa YouTube ọ bụla. Nke a bụ n'ihi na emebere algọridim YouTube iji kwado ọwa na vidiyo na-egosi metrik dị mma. Inweta ihe ndị ọzọ pụtara na ọdịnaya gị na ọwa gị nwere ike ịdị elu karịa na nsonaazụ ọchụchọ na ntụnye. Enwere ike iji usoro dị iche iche mee ihe iji nweta mmasị na vidiyo gị. Ị nwekwara ike zụta mmasị YouTube site na YTpals, ma lelee ọwa gị ka ọ na-eto. Edemede a ga-atụle mkpa mmasị dị na YouTube yana atụmatụ dị iche iche ị nwere ike were were mụbaa ha.
Algorithm YouTube na mkpa nke mmasị
Enwere algọridim dị iche iche atọ eji na YouTube, nke na-eji metrik maka ịhọrọ vidiyo maka ntụnye. Otu algọridim na-ahọrọ vidiyo ụfọdụ ka ha gosipụta na ibe mbụ nke onye ọrụ, ebe nke ọzọ na-achọpụta vidiyo ndị ọzọ dabara adaba maka ndị na-ekiri ya. Banyere algọridim nke atọ, ọ na-ahọrọ nhọrọ nkwanye vidiyo akpaaka na-esote mgbe ndị na-ekiri na-ekiri vidiyo. Mgbe YouTube na-ahọrọ vidiyo ndị a ga-eme ka ọ pụta ìhè, otu n'ime ihe kachasị mkpa ọ na-eburu n'uche bụ ọnụọgụ mmasị. Mmasị ndị a na-abawanye ohere nke ogo vidiyo dị elu na nsonaazụ ọchụchọ na ntụnye. Ọ bụrụ na vidiyo gị nwetara nnukwu mmasị na obere oge, mgbe ahụ ọ nwere ike nweta ewu ewu n'elu ikpo okwu ngwa ngwa.
Mmasị YouTube dị ezigbo mkpa maka ọwa. Ọ na-agwa algọridim YouTube na ndị na-ekiri ya na ọnụ ọgụgụ ntinye aka ndị na-ege gị ntị kwesịrị ịdeba ama. Ị nwere ike nweta ntụle nke metrik YouTube gị site na ngalaba nyocha. Nke a ga-agwa gị gbasara vidiyo ndị ọkacha mmasị na-amasị na ndị na-enwetaghị aka ndị na-ege ntị. Mgbe ndị na-ekiri ọhụrụ na-ekiri vidiyo gị, ha na-adaberekwa na mkpebi ha dabere na njikọ aka ị na-enweta n'aka ndị debanyere aha gị ugbu a ma ọ bụ ndị na-ekiri gị.
Enwere ike inwe oge mgbe ị na-enweta echiche na vidiyo gị, mana ime ka ndị na-ege gị ntị na vidiyo gị na-emekọrịta ihe bụ egwuregwu bọọlụ ọzọ kpamkpam. Ị nwere ike ichetara ndị na-ekiri gị ka ha na-etinye aka na vidiyo gị site n'oge ruo n'oge. Inweta nzaghachi n'aka ndị na-ekiri gị dị oke mkpa. Ka ị na-enweta nzaghachi dị mma site n'aka ndị na-ekiri gị, ndị nwere ike ịhụ gị ga-abawanye na vidiyo gị ga-amalite inweta nkwado na ntụkwasị obi kwesịrị ekwesị.
Uru nke inwe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmasị YouTube
Enwere ọtụtụ uru ị nwetakwu mmasị YouTube. Nke a bụ ndepụta ihe kpatara inwe ọtụtụ mmasị YouTube ji dị mkpa maka uto nke ọwa -
N'ihi na-adọta ndị na-ekiri: Ndị na-ekiri na-echekarị na ọdịnaya kachasị mma ga-enwe nnukwu mmasị na nkwupụta. Ka enwere mmasị na vidiyo, ka a ga-atụgharịkwu okporo ụzọ na ya. Mgbe vidiyo ndị dị na ọwa gị nwere nnukwu mmasị, ọ na-abawanye ntụkwasị obi ha n'anya ndị na-ekiri ya.
Maka ịkwado ọnụnọ mmadụ: Echiche nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-arụ ọrụ na ụkpụrụ dị mfe - ka mmasị ma ọ bụ echiche na vidiyo, nke ka ukwuu bụ ike mmadụ. Ntụkwasị obi gị n'elu ikpo okwu na-abawanye mgbe ị nwere ọnụ ọgụgụ mmasị dị ukwuu. Mgbe ị nwere metrik dị mma, ndị na-ekiri ahụ kwenyere na ị nwere ihe bara uru ịgbakwunye na oghere. Maka ebumnuche a, ọ dị mkpa ịmepụta niche n'elu ikpo okwu ma mepụta iwu gbasara isiokwu. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmasị na-ewepụ ndị asọmpi na niche gị ma weta ọwa gị n'ihu.
N'ihi na-abawanye ogo search engine: Ọ bụrụ na ị na-achọ isiokwu ọ bụla na YouTube, ọ na-adị mfe ịhụ na vidiyo ndị dị n'elu ndepụta nsonaazụ ọchụchọ bụ ndị nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmasị. Mgbe ị nwere ọnụọgụ mmasị dị ukwuu, ọ na-ekpochapụ ụzọ gị na ngalaba ọchụchọ YouTube. Mgbe mmadụ na-achọ isiokwu metụtara niche gị, ohere nke vidiyo gị na-agbago elu na ntinye aka na-abawanye.
Mgbasa mgbasa ozi na-aga nke ọmaỌtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-eji YouTube kwalite ngwaahịa, ọrụ na ọdịnaya ụfọdụ. Ọ bụrụ na vidiyo nke ọwa ọ bụla dị otú ahụ na-enweta ọtụtụ mmasị na nlele, mgbe ahụ ọ na-egosi eziokwu ahụ na digital marketing mkpọsa gara nke ọma. Inweta mmasị karịa na YouTube bụ ụzọ magburu onwe ya iji hụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ na-amasị ndị mmadụ.
Maka ịkwalite ikike gị: Mgbe ndị na-ekiri hụrụ na vidiyo gị nwere ọnụ ọgụgụ mmasị na nkọwa dị mma, ha na-ele gị anya dị ka ikike maka isiokwu. Ha ga-atụkwasị ọdịnaya gị obi maka ịnye ha ozi ziri ezi gbasara otu isiokwu. Ka ikike gị na-abawanye na niche gị, ị ga-enwe ike ịrị elu karịa ndị asọmpi gị na ewu ewu gị n'elu ikpo okwu ga-arị elu.
Na-abawanye okporo ụzọ na webụsaịtị gị: Vidio nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmasị na-enwekarị nlele. Vidiyo YouTube nwere ike ịdị mma maka iduzi okporo ụzọ gaa na weebụsaịtị nkeonwe ma ọ bụ azụmahịa gị. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmasị YouTube pụtara ọtụtụ ndị na-ekiri ihe, nke pụtara n'ezie nwere ike iduga ụlọ ọrụ ahụ.
Maka ndị debanyere aha YouTube na-eto eto: Anyị ekwuola na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmasị na nkọwa na vidiyo gị pụtara na ị ga-enwe ike ịdọta ọtụtụ ndị na-ekiri. Ka ọtụtụ mmadụ na-amalite ilele ọdịnaya gị, ha ga-amalitekwa ịdebanye aha na ọdịnaya gị. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike nweta ọtụtụ ndị debanyere aha site na YouTube mmasị.
Ndụmọdụ maka inwetakwu mmasị YouTube maka vidiyo gị
Iji nweta uru ego na YouTube, ọ dị mkpa ka gị na ndị na-ekiri echere na-akpakọrịta. Ịmepụta ebe ndị na-ege ntị na-adọrọ mmasị na-ewe oge na mgbalị. Otu n'ime nnukwu nsogbu ọwa na-eto eto na-eche ihu bụ ime ka ndị mmadụ na vidiyo na-emekọrịta ihe. O nwere ike ịbụ na ị nwere ọtụtụ mmadụ na-ekiri vidiyo gị, mana ọ bụghị ọtụtụ n'ime ha na-ahapụ mmasị. Yabụ ị ga-etinyerịrị ihe ncheta mgbe niile na-arịọ ndị na-ekiri gị ka ha bipute nkọwa ma nwee mmasị na vidiyo gị. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịkwalite nchịkọta njikọ aka gị na YouTube.
Na ngalaba na-esote, anyị ga-enye gị ọtụtụ ndụmọdụ maka ịbawanye ọnụ ọgụgụ mmasị na vidiyo gị. Iji ndụmọdụ ndị a, ị nwere ike ịmepụta atụmatụ gị maka ịbawanye ọnụego ntinye aka na ikpo okwu. Enwere nhọrọ ọzọ maka ịbawanye mmasị YouTube gị, nke ị nwere ike itinye na mgbakwunye na itinye ndụmọdụ ndị a. Ọ bụ site n'ịzụta mmasị YouTube site na isi mmalite ndị a pụrụ ịdabere na ya. Mgbe ịzụrụ mmasị YouTube, ị nwere ike hụ na ọwa gị na-eto ma n'oge na-adịghị anya ị ga-amalite ịhụ ndị na-ekiri na ndị debanyere aha na-etinye aka na ọdịnaya gị.
Na-abawanye mmasị site na ọdịnaya vidiyo
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inwe mmasị karịa na YouTube, ọ dị mkpa ịhụ na ọdịnaya vidiyo gị ruru ọkọ. Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji melite ọdịnaya vidiyo gị ka ị nwetakwuo mmasị YouTube.
1. Mepụta ọdịnaya na-atọ ụtọ na nkuzi
Ndị mmadụ na-abịa na YouTube maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Mgbe ụfọdụ, ha nwere ike chọọ ịmụta ihe gbasara isiokwu na oge ndị ọzọ ha nwere ike chọọ naanị ka a na-atọ ha ụtọ. Mgbe ị na-emepụta vidiyo n'elu ikpo okwu, ọ dị mkpa iji hụ na ị na-enye ndị na-ege ntị uru kachasị mma dịka mkpa ha siri dị. N'otu oge ahụ, ịkwesighi imebi àgwà ahụ. Ị nwere ike ịmụta ihe ndị na-ege ntị chọrọ ịhụ site n'ime nchọpụta isiokwu. Ụfọdụ isiokwu a na-achọkarị na YouTube bụ nri, ntụrụndụ, egwu, egwuregwu, egwuregwu, njem, egwuregwu, ịma mma na ejiji. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịme ntuli aka n'ịntanetị. Ọzọkwa, hụ na usoro nke vidiyo gị dabara na mmasị nke ndị na-ege gị ntị. Ị nwere ike ịtụle ịme otu esi eme vidiyo, nlebanya ngwaahịa, unboxing, top 10, mbugharị ngwaahịa, Q&A, wdg.
2. Leba anya n'usoro nke viral
Ị nwere ike nweta ezigbo mmasị na ọdịnaya gị site na ịmepụta vidiyo dabere na isiokwu na-ewu ewu. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike iji viral trends maka uru gị. Mgbe ụfọdụ isiokwu na-aga viral, ndị mmadụ na-achọ ịmụtakwu banyere ya. Ị nwere ike were ihe atụ nke ịma aka ịwụ ice, dịka ọmụmaatụ. Mgbe ihe ịma aka ahụ pụtara na mbụ, ndị mmadụ chọrọ ịmụtakwu banyere ya ebe ọ bụ na ha hụrụ ọtụtụ ndị a ma ama na-agbalị otu ihe ahụ. Ị nwekwara ike ilekwasị anya na vidiyo gị na isiokwu na-ewu ewu na akụkọ na omenala ndị ama ama. Ijikọ vidiyo gị na usoro ewu ewu anaghị adị mfe mgbe niile, agbanyeghị, ị nwere ike ịkwalite mmasị gị n'elu ikpo okwu site na imepụta ọdịnaya ndị ọzọ gbasara ọnọdụ.
3. Mmekọrịta na YouTubers
Ụzọ ọzọ dị mma isi mee ka ọtụtụ ndị na-ekiri bipụta mmasị na nkọwa na vidiyo gị bụ site na imekọ ihe na ndị YouTubers ndị ọzọ. Ị nwere ike nweta nnukwu njikọ aka n'aka ndị na-ekiri ya site n'igosipụta ndị na-emetụta ụlọ ọrụ na vidiyo gị. Nke a bụ n'ihi na ndị na-eme ihe ndị a na-enye gị ndị na-ege ntị ama ama. Mgbe gị na YouTubers ndị ọzọ na-emekọ ihe, ị na-agba ndị na-ekiri ha ume ka ha lelee ọwa gị.
Echiche ndị ọzọ ga-apụta mmasị na nkọwa. Na mgbakwunye na ịgbakwunye ndị na-ekiri gị, imekọ ihe ọnụ na YouTubers nwere ike ịnye echiche ọzọ na isiokwu nke niche gị. Nke a na-enye ikike karịa ọwa gị na oghere YouTube. Iso ndị YouTubers ndị ọzọ na-emekọ ihe nwere ike ịba uru n'otu n'otu, n'ihi na ọ ga-abawanye ọnụ ahịa mmasị na ntinye aka na ọwa abụọ ahụ.
4. Kaadị YouTube
Ị nwere ike nweta ọtụtụ ndị na-ekiri ka ha kirie vidiyo gị wee bipụtakwuo nkọwa na mmasị site na iji atụmatụ kaadị YouTube. Kaadị YouTube na-enyere gị aka ịkwalite vidiyo gị ndị ọzọ n'ime vidiyo. Ị nwere ike iji kaadị YouTube -
Ka ịkwalite vidiyo ndị ọzọ sitere na ọwa gị
Maka ichetara ndị mmadụ ka ha hapụ mmasị
Maka ịgba ndị ọrụ ume imejupụta ntuli aka
Iji duzie ndị na-ekiri na ibe ọdịda inye onyinye gị
Maka inye onyinye na-abụghị uru
Maka ịnweta ndị debanyere aha ọwa
Iji zipu okporo ụzọ na webụsaịtị gị
Kaadị YouTube nwere ike ịdị mma maka ịkwalite vidiyo gị na-adịghị arụ ọrụ nke nwere obere nlele na mmasị. Maka ịgbakwunye kaadị na YouTube gị, ọ dị mkpa ileba anya n'ebe echiche ndị ahụ kwụsịrị na ngalaba nyocha YouTube. Ọ ga-adị mma ịgbakwunye kaadị YouTube tupu oge ahụ.
5. Video njedebe ihuenyo
Ị nwekwara ike iji njirimara njedebe ihuenyo tinye oku ime ihe na ọwa YouTube gị. Ị nwere ike iji ihuenyo njedebe iji mee ka ndị na-ekiri ihe mara maka ọwa gị, ma ị nwere ike ịrịọ ha ka ha masịrị vidiyo gị. Enwere ike iji ihuenyo ngwụcha maka ịtụ vidiyo nke ị ga-ekiri na-esote. N'ụzọ dị otu a, ị ga-enwe ike iduzi ndị na-ekiri gị ka ha gaa na vidiyo gị ndị natara obere echiche na mmasị n'oge gara aga. Maka ịgbakwunye enyo njedebe na vidiyo gị, ị ga-agagharị na studio YouTube wee pịa akara ngosi pensụl iji lelee nkọwa vidiyo. Na ngalaba ahụ, ị ​​ga-ahụ nhọrọ ihuenyo ngwụcha. Ị nwere ike ịhọrọ ịgbakwunye ụdị ihuenyo njedebe ịchọrọ site na nhọrọ na-acha anụnụ anụnụ gbakwunyere, na mgbe nke ahụ gasịrị, ihe niile ị ga-eme bụ pịa na nchekwa.
6. Cross-akwalite vidiyo na-elekọta mmadụ media nyiwe
Ụzọ ọzọ dị mma isi nwekwuo mmasị na YouTube bụ site n'ịkwalite vidiyo gị na nyiwe mgbasa ozi ọhaneze ndị ọzọ n'ịntanetị. Ọtụtụ netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta dịka Facebook, Instagram na Twitter nwekwara ọdịnaya vidiyo. Enwere ike iji ọwa ndị a iji kwalite vidiyo gị maka ịbawanye ọnụ ọgụgụ nlele, mmasị na ndị debanyere aha. Na Instagram, ị nwere ike iji atụmatụ akụkọ kesaa teasers vidiyo YouTube gị wee tinye njikọ na vidiyo na bio gị. Ịkwalite vidiyo YouTube gị n'ofe bụ ụzọ dị mma iji gosi ndị na-eso ụzọ gị na ị nwere obodo na-arụsi ọrụ ike na YouTube nakwa na ha nwekwara ike ịbụ akụkụ nke ahụ. Ka ndị na-ekiri ọhụrụ na-ekiri vidiyo gị, ha ga-etinyekwu nkọwa na mmasị.
Na-abawanye mmasị site SEO
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye ndị na-ekiri gị na ntinye aka n'elu ikpo okwu, ọ dị mkpa ịmụta banyere usoro nyocha search engine (SEO). Algọridim YouTube na-enyocha ọdịnaya na igwe nchọta dabere na ihe ụfọdụ. Yabụ, ọ dị mkpa ịkwalite aha, mkpado na nkọwa vidiyo gị. Nke a bụ ụzọ ụfọdụ iji bulie mmasị na vidiyo YouTube gị site na SEO:
1. Ịmepụta utu aha vidiyo bụ isi okwu bara ụba
Nnyocha isiokwu dị mkpa iji hụ na ọdịnaya gị ruru ndị na-ekiri ya. Ha bụ akpaokwu na okwu ndị mmadụ na-eji achọ ọdịnaya. Mgbe ị na-emepụta ọdịnaya gị gburugburu mkpụrụokwu ebumnuche, ị nwere ike hụ na igwe ọchụchọ na-akwado ha ndị na-ekiri ha. Iji nwee ike ịbawanye ohere ị nweta ọtụtụ echiche na mmasị site na ịgbakwunye mkpụrụokwu ndị dị mkpa na aha gị. N'ụzọ dị otú a, ndị na-ekiri gị ga-enwe ike ịchọta ọdịnaya gị ngwa ngwa. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ nyocha isiokwu dị n'ịntanetị nke enwere ike iji chọta mkpụrụokwu dabara adaba. Ụzọ ọzọ ị ga-esi chọta mkpụrụokwu YouTube akọwapụtara kpọmkwem bụ site n'itinye isiokwu n'ime mmanya ọchụchọ. Isi okwu bụ ihe e buru n'amụma na-apụta mgbe ị na-achọ isiokwu. Okwu ndị a e buru n'amụma bụ ihe ọtụtụ ndị na-ekiri na-achọ.
2. Tinye isi okwu na nkọwa vidiyo
Ị nwere ike ịkwalite nkọwa vidiyo gị dị ka aha vidiyo. Nkọwa vidiyo bụ mpaghara ebe ndị na-ekiri na-amụta ihe vidiyo gị gbasara. Enwere ike iji ya bulie ogo gị na nsonaazụ ọchụchọ site na iji mkpụrụokwu dabara adaba. Site n'iji usoro okwu isiokwu eme ihe, ọ bụghị naanị na ị ga-emeziwanye ọnụego pịa-site mana ọ ga-abawanye mmasị na echiche gị. Ekwesịrị ịdepụta nkọwa vidiyo ahụ n'ụzọ nke na-adọta mmasị nke ndị na-ege ntị, ebe ọ ka na-etinye mkpụrụokwu bara uru.
3. Tinye mkpado na YouTube videos
Mkpado vidiyo na YouTube dị mma maka ịhazi ọdịnaya gị na algọridim ọchụchọ. Ọ na-enyere aka ịghọta isiokwu vidiyo gị na-ezubere iche. Na mgbakwunye na aha vidiyo na nkọwa, mkpado vidiyo a ga-ejirịrị maka vidiyo gị nke ọma. Ị nwekwara ike ilele mkpado vidiyo nke ndị asọmpi na-eji zụlite nghọta nke ndị dị mkpa na niche gị. Maka ịlele mkpado na vidiyo ọ bụla, enwere ike ịgbaso usoro ndị a -
Gaa na vidiyo YouTube site na iji ihe nchọgharị weebụ ọ bụla.
Pịa aka nri na ibe wee họrọ "Lee Iyi Ibe."
Pịa Ctrl + F (maka Windows) ma ọ bụ Command + F (maka Mac). Koodu isi mmalite ga-apụta nke enwere ike iji chọọ mkpụrụokwu.
Ị ga-enwe ike ịhụ ndepụta mkpado ejiri maka vidiyo ahụ.
4. Jiri onyonyo thumbnail mee ihe maka uru gị
Ị nwere ike nweta mmasị ndị ọzọ maka vidiyo gị site n'ịkwalite foto vidiyo gị nke thumbnail. Onyonyo ntanaka dị mkpa maka ime ka vidiyo gị pụta ìhè na ibe mbụ YouTube, ndepụta vidiyo atụpụtara, nsonaazụ vidiyo ọchụchọ, yana kwa na mgbasa ozi ọha. Inwe thumbnail na-ejide anya na vidiyo gị nwere ike ịgba ndị mmadụ ume ka ha lelee na bipute nkọwa na mmasị na ọdịnaya gị. Nha nke akwadoro maka vidiyo dị gburugburu 1280×720, nke kwesịrị inwe opekempe obosara nke 640 pikselụ. Onyonyo dị elu kwesịrị inwe mkpụrụedemede na-adọrọ adọrọ iji mụbaa ọgụgụ. Ị nwekwara ike iji ihe dị nso maka ihu kpalite njikọ mmetụta uche na ndị na-ege ntị. thumbnail kwesịrị ikwekọ na ọdịnaya vidiyo gị. Iji clickbait hacks maka ịwelite thumbnails abụghị ezigbo echiche ka ọ na-eduhie ndị na-ekiri ya.
5. Jiri ntụgharị vidiyo mee ihe
A maara ndegharị vidiyo dị ka isiokwu mechiri emechi na YouTube. Ndegharị vidiyo nwere ike melite ogo vidiyo gị n'elu ikpo okwu yana mee ka ọ dịkwuo mfe ịnweta. Site na iji nkọwa okwu emechiri emechi, ndị na-ege ntị buru ibu nwere ike ịlele vidiyo gị. Nke a bụ n'ihi na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-ege ntị nwere ike ha anaghị asụ otu asụsụ ma ọ bụ na ha nwere ike nwee nsogbu ịnụ ihe. Site na itinye nkọwa okwu mechiri emechi, ị na-eme vidiyo ndị ahụ ka ha na-enweta ma na-akpọkwu ndị na-ekiri ka ha tinye aka na ọdịnaya gị wee bipute nkọwa na mmasị.
Ịzụta mmasị YouTube - mkpa na uru
Ekwupụtalarị ịdị mkpa nke mmasị YouTube na isi ihe ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Otu ụzọ ị ga-esi nweta ọtụtụ mmasị maka vidiyo gị bụ site n'ịgwa ndị na-ekiri gị ka ha nwee mmasị, kesaa na ịdenye aha na ọwa gị. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ị nwere ike ị gaghị enweta njikọ aka achọrọ n'aka ndị na-ekiri gị ọbụlagodi mgbe ị were usoro niile a kpọtụrụ aha n'elu. N'ọnọdụ dị otú ahụ, Ọ ga-abụ ihe dị mma ịkwụ ụgwọ maka mmasị YouTube site na ndị na-enye ọrụ a pụrụ ịdabere na ya dị ka YTpals.
Ịzụta mmasị YouTube ga-eme ka ị na-ekiri ihe na-aga n'ihu, nke ga-emecha nyere aka gbaa ọtụtụ ndị mmadụ ume ịdenye aha na ọwa gị ma tinye aka na ọdịnaya gị. Vidiyo gị nwere ike ikpughe ndị na-ege ntị ọhụrụ, nke na-agaghị enwe ike ịchọpụta ọwa gị ma ọ bụghị ya. Ka anyị lelee ụfọdụ uru dị n'ịzụta mmasị YouTube.
1. Na-enye ọwa gị ihe akaebe ọha na eze n'elu ikpo okwu
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme vidiyo gị ka ọ bụrụ viral na ahịa ọdịnaya vidiyo, ọ dị mkpa inwe ikike ụfọdụ n'elu ikpo okwu. Dịka ekwuru n'akụkọ a, enwere ike ịbawanye ama ma ọ bụ ọnụnọ n'elu ikpo okwu site na imeziwanye metrik nke ọwa YouTube gị. Mmasị YouTube bụ metrik dị mkpa maka ịlele ọnọdụ ọha na eze nke ọwa. Mgbe ịzụrụ mmasị, ị ga-enwe ike nweta amara na ịbawanye ntụkwasị obi n'elu ikpo okwu. Ọ na-eme dị ka ihe akaebe na-elekọta mmadụ, nke ga-enyere gị aka inweta ọtụtụ ndị na-ekiri na ndị debanyere aha n'ọdịnihu.
2. Na-abawanye ọkwa na nsonaazụ ọchụchọ
Ụzọ kachasị mma isi mee ka ndị na-ekiri vidiyo gị dịkwuo elu bụ site n'ịkwalite ha ka ha pụta na nsonaazụ ọchụchọ. Dabere na nyocha na nso nso a, ihe karịrị pasenti 60 nke ndị na-ekiri na YouTube na-achọ vidiyo site na isiokwu dị n'ụlọ mmanya kama ịga na ọwa. Ị nwere ike ịbawanye ogo vidiyo gị na nsonaazụ ọchụchọ site na imeziwanye metrik gị nke nwere mmasị, nlele na nkọwa. Mgbe ịzụrụ mmasị YouTube, ọ na-egosi na YouTube algọridim na ọnụego ntinye aka gị dị elu. N'ụzọ dị otu a, ị ga-enwe ike ịkwado elu na nsonaazụ ọchụchọ mgbe ndị mmadụ na-achọ isiokwu nke niche gị. N'ikpeazụ, ọwa gị ga-enwekwa ike ịmepụta okporo ụzọ organic, nke ga-eme ka ọnụego ntinye aka dịkwuo elu.
3. Maka ịdọta ndị na-ege ntị
Ozugbo ịmepụtara vidiyo na isiokwu, ịchọrọ ịhụ na ọ ruru ndị na-ege ntị nke ọma na-enwe ekele maka ntinye gị. Ị nwere ike hụ na vidiyo gị ruru ndị na-ege ntị site n'ịzụta mmasị YouTube site na isi mmalite ndị a pụrụ ịtụkwasị obi dị ka YTpals. Mgbe ị nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mmasị na nkọwa na vidiyo gị, ọ na-egosi na ị nwere ikike ụfọdụ na isiokwu ahụ. Ndị na-ekiri ọhụrụ ga-emecha tụkwasị obi n'ụdị ọdịnaya ị na-eke. Ịzụta mmasị bụ atụmatụ magburu onwe ya iji dọta ndị na-ege gị ntị.
4. Maka ịkwọ ụgbọ ala na nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ
Mgbe ị na-akwụ ụgwọ maka mmasị, ọ na-abawanye visibiliti gị n'elu ikpo okwu. Ndị na-ekiri nwere ike ịhụ ọdịnaya gị n'ụzọ dị mfe ma emesịa ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha gị na-amalite ịba ụba. Enwere ike iduzi ndị na-ekiri gị na YouTube na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ ebe ịchọrọ ịmepụta ọnụnọ siri ike. Nke a bara uru karịsịa maka ịzụ ahịa ngwaahịa gị ma ọ bụrụ na ị nwere azụmahịa. A maara ndị mmadụ ka ha na-atụgharị uche na ọdịnaya vidiyo, yabụ ị nwere ike iduzi okporo ụzọ YouTube na webụsaịtị, nke nwere ike ịba uru maka ịbawanye ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
5. Maka ịmalite njem YouTube
Mgbe ị na-amalite ọwa, ọ nwere ike isi ike ịnweta ndị na-ekiri ka ha lelee ọdịnaya gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ọrụ YouTube gị, itinye aka na vidiyo mbụ gị dị oke mkpa. Ịzụta mmasị YouTube nwere ike ịtọ gị n'ụzọ ziri ezi na ọwa gị ga-enwe ike ịmalite ịmalite ike. Ọ ga-abawanye ndị na-ekiri gị na ikpo okwu, ka oge na-agakwa ndị debanyere aha gị ga-anọgide na-etinye aka na ọdịnaya gị. Ọ nwere ike inye aka n'iwega ọrụ YouTube gị n'ọkwa ọzọ.
6. Inweta ewu ewu
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ ihe mmetụta YouTube, mgbe ahụ ịzụrụ mmasị YouTube nwere ike ịtọ gị n'ụzọ ziri ezi iji nweta ebumnuche gị. Inweta ewu ewu na YouTube na-emepe ụwa nke ohere maka ndị mmadụ, gụnyere nkwado. Ọ bụrụ na ịga n'ihu na-emepụta vidiyo na-adọrọ mmasị, ị ga-enwe ike iwulite ntọala ndị debanyere aha raara onwe ya nye. Ọ bụghị naanị na ha ga-etinye aka na ọdịnaya gị kamakwa kwalite ya.
7. Ka ọ nọrọ n’ihu asọmpi
YouTube bụ ikpo okwu na-asọmpi nke ukwuu, ebe a na-agbakwunye nde vidiyo kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ n'ihu asọmpi a, ị ga-etinye usoro ụfọdụ ga-enyere aka na uto gị. Ohere bụ ọtụtụ n'ime ndị asọmpi gị na-azụta mmasị na nkọwa YouTube. Ya mere, ọ ga-abụ ihe dị mma ịzụrụ YouTube masịrị ya maka ọwa gị ma ọ bụrụ na ịchọghị ịnọ na mwepu.
Ugbu a ịmara mkpa na uru dị n'ịzụta mmasị YouTube, ị nwere ike ịtụle ịzụrụ ha maka ọwa gị iji nyere aka na uto ha. Mgbe ịzụrụ mmasị n'aka YTpals, ị ga-enwe ike ịbawanye njide ndị na-ekiri na vidiyo gị. Nsonaazụ ga-amalite ịpụta awa 24 ruo 72 mgbe itinye iwu ahụ, ndị mmadụ ga-enweta mmasị karịa bots. Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị taa ka ịmatakwu gbasara ọrụ YouTube adịchaghị mkpa site na YTpals.